Iindaba - Iingcebiso zokuthenga ifenitshala yentsimbi
Iitafile zasebusuku / iitafile ezisecaleni
Itheyibhile kaMosaic & neZitulo
Iziteyiki zaseGadini/Izilwanyana zesinyithi
Iintsimbi zeGarden Wind / Wind Chimes
IZityalo zeZityalo/Iimbiza zeentyatyambo
IRakhi yeWayini kunye nesiPhathi seeglasi
UKUHAMBISANA KOMTHETHO/UKUHAMBISANA UDONGO
Enye iFestival Décor
I-METAL TABLETOP DECOR
uMboniso & nesatifikethi
Iingcebiso zokuthenga ifenitshala yentsimbi
Ifenitshala yentsimbi esetyenzisiweyo ifanelekile ukuba ibekwe kwiindawo ezininzi ezifana neebhalkhoni, amagumbi okulala, amagumbi okuhlala, njl. Banika ikhaya inkangeleko entsha egcwele imbonakalo enomtsalane.
Ngoko ke indlela yokuthenga ifenitshala yentsimbi ekhandiweyo? Ifanele igcinwe njani ifanitshala yentsimbi eyenziweyo?
Inxalenye1: Ubume be-wifanitshala yentsimbi
Inyathelo lokuqala lokuthenga nokugcina ifanitshala yentsimbi kukwazi nokuqonda ukuba yintoni imathiriyeli yentsimbi ekwenziwa ngayo ifenitshala. Kwinkcazo elula, ifenitshala yentsimbi ekhandiweyo ibhekisela kwifenitshala eyenziwe kwizinto zetsimbi ezicutshungulwayo ngobugcisa kunye nentsimbi iyona nto iphambili okanye izinto zokuhombisa inxalenye.
1. I yenziwe ifanitshala yentsimbi
Izinto zefenitshala yentsimbi ubukhulu becala yintsimbi kwaye ngamanye amaxesha idityaniswe nelaphu okanye umthi oqinileyo. Iifenitshala ezininzi ekhaya zenziwe ngokupheleleyo ngentsimbi ekhandiweyo: iitafile zekofu, izitendi zeentyatyambo, iirakhi zeglasi yewayini, isibambi sekomityi, iirakhi zewayini kunye nekomityi, iipanti ezixhonywe eludongeni, umzobo oxhonywe eludongeni.
Enye ifanitshala yenziwe ngentsimbi kwaye idityaniswe nelaphu kunye nengxowa yokhuni njengetafile yokutyela yeglasi, izitulo zegumbi lokuphumla, izitulo ezingenanto yokwenza, iitafile zokulala, iitafile ezisecaleni kwebhedi, iitafile zokulala ebusuku njl.
Bonke abo bangaphezulu kwefenitshala yekhaya babelana ngeempawu ezifanayo; leyo yindlela yabo yokulungisa intsimbi ukuze bafumane iimveliso ezigqityiweyo. Imathiriyeli yentsimbi inokucutshungulwa kwiimilo ezahlukahlukeneyo ngokusebenzisa isitampu, ukubunjwa, ukuphosa, ukubumba, ukujija, kunye nokuwelda. Ukongeza kokufumana ukugqiba okugudileyo, ifenitshala yentsimbi ifuna unyango lwesibini olufana ne-electroplating, ukutshiza kunye nokugquma kweplastiki kunyango lomphezulu. Kwinqanaba lokugqibela lokufumana imveliso yokugqibela kanye yenziwe kwiindawo ezahlukeneyo, i-welding, i-screwing, i-pin kunye nezinye iindlela zokudibanisa ziyafuneka ukuba uzifake.
2. Iimpawu kunye nokusebenzisa yefenitshala yentsimbi
Ifenitshala yentsimbi ekhandiweyo ifanelekile kwigumbi langoku. Iimpawu zezinto zentsimbi ziluncedo olukhulu xa kuthelekiswa nezinye izinto ezinjengomthi, iglasi okanye ilaphu. Oku kulandelayo sisingeniso esicacileyo kwiimpawu zefenitshala yentsimbi.
a) Ukuchasa ukuguga kunye nezinto ezihlala ixesha elide
Ifenitshala yobugcisa bentsimbi inobomi obude benkonzo. Ukongeza kubunzima bentsimbi ngokwayo, ifenitshala yobugcisa bentsimbi inokugqunywa ngomaleko wepeyinti ukuthintela i-oxidation ekhokelela kwibala / umhlwa.
b) indibaniselwano enomtsalane kunye nezinye izinto
Ifenitshala yentsimbi ekhandiweyo iyaziwa ngokudibanisa "intsimbi + ilaphu" kunye "nentsimbi + yomthi oqinileyo". Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi indlela yokufanisa, unokufumana iindlela ezininzi ezifanelekileyo ezifanelekileyo kunye nefenitshala yentsimbi, kwaye yonke inhlanganisela inika umphumo obalaseleyo wokuhlobisa.
Umzekelo: itafile yentsimbi inokudibaniswa kunye nesofa yelaphu; Itafile yentsimbi esecaleni kwebhedi enebhedi egqunywe ngumqhaphu.
Icandelo 2: 6tiips zokuthenga ifanitshala yentsimbi
Bayanda abantu abathanda ukuya kuthenga ifanitshala yentsimbi ekhandiweyo kwimarike yefanitshala, ukusuka kwizitendi zezibane zentsimbi ukuya kwiitafile eziluliweyo ezisecaleni kwebhedi, ukusuka kwiingcango zentsimbi ezikhandiweyo ukuya kwiifestile zentsimbi. Kodwa sinokukhetha njani ifanitshala yentsimbi elungileyo?
1. Khangela izinto zefenitshala yentsimbi
Ifenitshala yobugcisa bentsimbi ineendibaniselwano ezisisiseko ezifana nentsimbi - iglasi, isinyithi - ngesikhumba, isinyithi - umthi oqinileyo kunye nentsimbi - ilaphu. Nika ingqalelo kwizinto eziphathekayo xa ukhetha ifenitshala yentsimbi. Ungaqala ngokubamba, ukujonga umbala, kwaye ujonge ukuqaqamba. Iimveliso zentsimbi eyenziwe kakuhle zidla ngokuziva zigudile kwaye zikhazimlisiwe, ipateni eyenziweyo ayifanelanga ivakale irhabaxa xa iphathwa, kwaye umbala kufuneka ucace.
2. Qwalasela leisimbo sefenitshala yentsimbi
Xa ukhetha ifenitshala yentsimbi, kufuneka ucinge ngesitayela sendlu ofuna ukuyihombisa. Ukuba ikhaya lipeyintwe ngemibala eqaqambileyo, ifenitshala yentsimbi oyikhethayo kufuneka ibe qinileyo indibaniselwano yomthi kunye nempahla yentsimbi; imibala ubukhulu becala lubhedu kunye negolide. Iindonga ezimhlophe zihamba kunye nefenitshala yobhedu njengekofu okanye iitafile zentsimbi yokulala, umzobo wegolide wobugcisa.
3. Jonga iinkcukacha zeumsebenzi wefenitshala yentsimbis
Xa uthenga ifenitshala yentsimbi, ngokuqhelekileyo kufuneka uhlolisise ukuba ngaba iinqununu zentsimbi ziye zaphathwa nge-anti-corrosion, ngaphandle koko ifenitshala ilula ukugqwala. Nika ingqalelo ekhethekileyo ukuba ngaba unyango lwe-anti-corrosion lwezihlanganisi phakathi kwezinto zetsimbi lwenziwa kakuhle kunye nokuba kukho ukusilela okucacileyo. Enye ifanitshala iya kusetyenziswa kwiindawo ezifumileyo ekhaya ezifana neerakhi zasekhitshini, iirakhi zeglasi, iitafile zekofu. Kufuneka zinyangwe ngepeyinti enqanda umhlwa.
4. Ljonga iinkcukacha iipateni yefenitshala yentsimbi
Xa uthenga ifenitshala yentsimbi, nikela ingqalelo kwiinkcukacha. Ngokomzekelo, enye ifanitshala ihonjiswe ngamagqabi. Kule meko, jonga ngononophelo ukuba ngaba ubugcisa bubuthathaka kunye nokuba kukho imilo yomgca eyaphukileyo.
5. I ukuwelda kwefenitshala yentsimbi
Amanqaku e-welding yeemveliso zefenitshala ezilungileyo zentsimbi aziyi kuphuma. Jonga umgangatho wefenitshala yentsimbi ekhandiweyo, kwaye unokubetha inxalenye edibeneyo yefenitshala ngento enzima. Ukuba umgangatho ulungile, uphawu lokunkqonkqoza luyafana nombala wengqekembe. Ukuba umgangatho awulungile, uya kubonisa ngokubanzi umbala obomvu.
Eminye indawo yeyona ifanele ijongwe njengaphakathi kwemilenze yetafile kunye neetafile eziphezulu kwimeko yeetafile zokuzalela.
Ixesha lokuposa: Dec-10-2020
Metal Garden Decoration, UbuGcisa beGadi banamhlanje, ilanteni yokuhombisa, izibane zelanga, Garden Decor Metal, isibane esikhokeleyo,
IZIPHATHI ZAMAKHANDLELA KUNYE NEZINTANE
UKUHAMBISANA KOMnyhadala / UKUHAMBISANA UDONGO
IGADI & PATIO
IITHEBILE NEZItulo / IISETI ZEbhedi